နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ပိတောက်တစ်မျက်နှာ အရာရာ
အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ် ကိုယ်ချစ်သူဟာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အချစ်သစ်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သိလိုက်ရတယ် ဇော်မိုးသစ်ရဲ့ပြတ်သားမှုကို သဘောကျတယ်၊
အချစ်တွေပျောက်ဆုံးမသွားဖို့ ရင်ခုန်သံတွေအမြဲ လတ်ဆတ်နေဖို့လိုတယ်လေ.. အေးစက်လွန်းတဲ့ချစ်သူဘ၀က ငြီးငွေ့စရာမို့ အချစ်သစ်ရှာတွေ့သွားတာ အမှားလို့မဆိုသာပါဘူး.. ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်အပေါ်အမြဲ စိတ်ဝင်တစားရှိနေအောင် ဖန်းတီးတတ်ခြင်းဆိုတာလဲ အရည်အချင်းတခုပါပဲ.. ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့စာလေးပါ..
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေပါပဲ .. မိုးခါးတော့ ကြိုက်တယ်
မချစ်တာကို မချစ်ဘူးပြောတာ သစ္စာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ .. အတင်းဇွတ်မှိတ် လက်ထပ်ဖြစ်မှ နောက်ပိုင်း အဆင်မပြေတာတွေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ကြုံရမှာလေ .. အဲဒီအခါမှ ပြင်လို့လည်း မရ စိတ်လည်း မချမ်းသာ ..
ပြတ်ပြတ်သားသားရှိတာပဲ ကြိုက်တယ် ..း)
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် နှစ်သက်တယ်ဗျ ဒီပုံစံလေးကို . . သစ္စာဖောက်တာထက် မချစ်ပဲ ယူလိုက်ပြီး အဆင်မပြေရင် ပိုဆိုးလာမယ် . . .
အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ် . . . အချစ်ဆိုတာ အပြုံးတစ်ပွင့်နဲ့လည်း ဖြစ်တည်တယ် အသံလေးတစ်စွန်းတစ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တည်တယ် အကြည့်လေး တချက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ် . . .
အားလုံးပြောတာ ကို ထောက်ခံပါတယ်. . . အနေဝေးရင်သွေးအေးတတ်တာ ယောက်ျားလေးတော်၂များ၂ ရဲ့သဘာဝပါ အဲဒီအချိန်မှာ ထပ်ပြီးရင်ခုန်ရမယ့်လူကိုတွေ့တော့ အရင်လူကို မချစ်တော့တာပါ . . ဒါပေမယ့်မချစ်တော့ဘူးလို့ ပွင့်၂လင်း၂ပြောတာရဲ့တာတော့ ကောင်းတယ်..
လက်ထပ်ပြီး ကလေးတွေ ရပြီးးမှ မချစ်နိုင်တော့တာ သိလာပြီးလမ်းခွဲတာထက်စာရင်..မယူခင်ခွဲတာကောင်းတာပေါ့..
ဒါနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တိုင်း ဒါပဲယူရမယ်လို့ ဘယ်လူမျိုးမှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး
မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြား မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကြား ၈နှစ်ကြာအောင် တွဲလာကြပြီး တစ်နေ့လက်ထပ်ကြမယ်လို့လည်း အားလုံးက သိပြီးကာမှ ယောက်ျားလေးဘက်က စိတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့အခါ နစ်နာသူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ.. သူဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့ရှာမလဲ။
ဒါတွေကို ဘာမှထည့်တွက်ဖို့ မလိုဘူးဆိုရင်တော့ ပြတ်သားတဲ့သူကို ချီးကျုးတာကောင်းပါတယ်။
အရှုံးထဲက အမြတ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့...
ယူပြီးမှဆို မိန်းခလေးဘက်က တသက်လုံး သွားပြီလေ...။
စာလေးကော ပုံလေးကော သဘောကျတယ် ။ ပုံလေးကိုတော့ ပိုသွားတယ် :P
ဇာတ်လမ်းက ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ နှစ်ခေါက်
လောက် ထပ်ဖတ်ကြည့်တယ် ကောင်း၏ ...
အစ်မရဲ့ ချောမောပြေပြစ်တဲ့ အရေးအသားမှာ နစ်မြောရင်း တစ်ပုဒ်လုံးမှာ ဇော်မိုးသစ်ရဲ့ အတ္တတွေကို အဆက်မပြတ် တွေ့နေရပါတယ်။ အချစ်သစ်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးပဲစစ်နေပါစေ ၈နှစ်လုံးတွဲလာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို (မြန်မာ)ယောက်ျားကောင်းဆိုရင် ယူသင့်တဲ့ တာဝန်ယူပြီး လုပ်သင့်တာကိုပဲ လုပ်ရမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မို့မို့ခင်လေးအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာပါ။ ဇော်မိုးသစ်လို ယောက်ျားမျိုးက နှစ်တွေကြာလို့ အသစ်တွေ့ရင် ထပ်ပြီးစိတ်ပြောင်းနိုင်ဦးမယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ...
တကယ့်လက်တွေ့အပြင်မှာလဲ ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေ တကယ်ရှိမှာပါပဲနော်...
ပျော်စရာ သင်္ကြန်တွင်းအိမ်ပြန်ခရီး ဖြစ်ပါစေ အစ်မရေ...း)
သစ္စာမ၇ှိတဲ့ယောကျာင်္းအချစ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆို၇င်မိန်းမကိုယူမနေတော့ဘဲတချစ်ပြီးတချစ်သာပြောင်းတော့ သစ္စာမ၇ှိလို့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကိုပြတ်သားတယ်ဆိုပြီးကြံဖန်အမွမ်းတင်တဲ့သူတွေကိုယ်ကသစ္စာအဖောက်ခံ၇ ၇င်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နှမသစ္စာအဖောက်ခံ၇၇င်ဒီလိုမျိုးအမွမ်းတင်နိုင်မလားသိချင်တယ်